မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန် အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြသွားတဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင် - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန် အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြသွားတဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း မိုက်ကယ် အိုဝင် ရဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ မှု ဟာ အန်ဖီးလ် ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဒီ အပြောင်း အရွှေ့ ကို စိတ်ပျက်မှု ၊ ဒေါသထွက်မှု တွေ နဲ့ တုန့်ပြန် ခဲ့ ပြီး အိုဝင် ကို နှလုံးသား ထဲ ကနေ ထုတ်ပယ် ပစ်ခဲ့သူတွေ အထိ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အိုဝင် ကတော့ သူဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အရာ ကို လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ နောင်တ မရမိကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ သလို ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူ မိကြောင်း ကို အလျှင်းသင့်သလို ထည့်သွင်း ပြောဆို လေ့ ရှိပါတယ် ။
အိုဝင် ဟာ လီဗာပူး ကနေ ရီးရဲမက်ဒရစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အဆင်မပြေ မှုတွေ ကြောင့် အင်္ဂလန် ကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ကာ နယူးကာဆယ် မှာ ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ နယူးကာဆယ် ဟာ အိုဝင် ၊ မာတင် ၊ ဗီဒူကာ တို့လို နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှုးတွေ ရှိခဲ့ ပေမယ့် ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ ဘောလုံး ရာသီမှာ တန်းဆင်း ခဲ့ရပြီး အိုဝင် လည်း စာချုပ် ပြည့်လို့ အလွတ် နဲ့ ထွက်ခွာ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီလို အနေ အထားကနေ အိုဝင် ဟာ သုံးသပ်သူတွေ မျှော်လင့် မထားတဲ့ လမ်းကြောင်း ကို ရွေးချယ် ခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ ဖြစ်ရပ် ဟာ အများသူငှာ ထင်မှတ် မထားခဲ့ တဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိုဝင် ကိုယ်တိုင်တောင်မှ အံ့အား သင့်မိ ခဲ့တယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ ပါတယ် ။
အိုဝင် ဟာ အဆိုပါ အကြောင်းတွေ ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ မှာ ဖြန့်ချီ မယ့် သူ့ရဲ့ စာအုပ်သစ် “Michael Owen : Reboot – My Life, My Time” မှာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ထားခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အိုဝင် ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တုန်းက အသင်း လက်မဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး ဖြစ်နေ ခဲ့ပြီး အသင်းသစ် ကို ရှာဖွေ နေချိန် ဖြစ် ပါတယ် ။
အိုဝင် ဟာ လီဗာပူး ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် အဲဗာတန် မှာ ကစား ဖို့ စဉ်းစား နေပြီး လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အမုန်း တရား ကို သတိပြု မိ လင့် ကစား အိုဝင် ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ ဘာ အမှား မှ ကျူးလွန် မိတာ မဟုတ်ဘူး လို့ ခံယူ ထားတဲ့ အတွက် ဒေးဗစ် မိုရက်စ် နဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ တယ် လို့ ဆိုထား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ဆွေးနွေး နေတဲ့ အနေ အထား ကနေ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား တစ်ဦး က ဖုန်းဆက် လာချိန် မှာတော့ အိုဝင် ရဲ့ ဘ၀ ဟာ ပြောင်းလဲမှု တွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ် ။ အိုဝင် ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖာဂူဆန် နဲ့ မတွေ့ခင် တစ်ည မှာ ကောင်းစွာ အိပ်မပျော် ခဲ့ဘဲ အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကို သွားရောက် ကစား ဖို့ အတွက် ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှား နေခဲ့တယ် လို့ ဖော်ပြ ခဲ့ ပါတယ် ။
“ဒေးဗစ် မိုရက်စ် နဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ၂ ရက် လောက် အကြာ မှာ နစ်ကီဘတ် ဆီကနေ ဖုန်း ၀င်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဆာအဲလက်စ် က ကျွန်တော့ ဆီ ဆက်လိမ့်မယ် ၊ သူ မင်း ကို ခေါ်ချင် နေတယ် လို့ ဘတ် က ပြောသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါက တကယ်ကို မယုံနိုင် စရာ ပါပဲ”
“ကျွန်တော် အိမ်ခန်း ထဲ ၀င်ပြီး လူးဝစ် ကို ပြောခဲ့ မိပါတယ် ။ ကျွန်တော့ ခေါင်းတွေ ချာချာ လည်နေ ခဲ့တာဗျ ။ ဆုဖလား တွေ ကို ပုံမှန် ရယူ နေတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ၊ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ၊ နာမည်ကျော်တွေ ၊ ပရိသတ် ၇ သောင်းခွဲ ဆံ့တဲ့ ကွင်းကြီး . . . တကယ်ကို စိတ်လှုပ် ရှား စရာ ပါပဲ”
“နောက်ထပ် နာရီ အနည်းငယ် လောက် ကြာတဲ့ အထိ ကျွန်တော် ဖုန်းအနားမှာ ပဲ ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ ခဏခဏ စောင်းကြည့် ရင်းပေါ့ ။ ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ဖုန်းက ထမြည် လာခဲ့ ပါတယ် ။ မှတ်မထားတဲ့ နံပါတ် စိမ်း တစ်ခု ပါ ။ ဒါမျိုးတွေ ကို ကျွန်တော် ကိုင်လေ့ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ တော့ ကျွန်တော် က စောင့်နေခဲ့ တဲ့ သူလေ”
“ဖုန်းကို ၅ စက္ကန့် ၆ စက္ကန့် လောက် ကြာအောင် မြည်ခိုင်း လိုက်ပြီးမှ ကိုင်လိုက် ပါတယ် ။ တကယ်ပဲ သူပါ ။ ကျွန်တော် ဆာအဲလက်စ် နဲ့ ခဏလောက် စကားပြောဖြစ် ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက် မှာတော့ သူ့အိမ်ကို လာဖို့ ကျွန်တော့ ကို ဖိတ်လိုက် ပါတယ်”
“အိပ်လို့ တောင် မပျော် ခဲ့ ပါဘူး ။ နောက်နေ့ ရောက်တော့ အကျီ အ၀တ် အစားကို သေချာရွေးပြီး ကား မောင်းထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ အိမ်နဲ့ တစ်မိုင် နီးပါး လောက် ကွာတဲ့ စူပါမားကတ် ကို ရောက်တော့ ချိန်းထား တဲ့ အချိန် ထက် ၁၅ မိနစ် စောနေ ပါသေးတယ်”
“ဆယ် မိနစ် စောပြီး သူ့ဆီ ရောက်ဖို့ က ကျွန်တော့ ရဲ့ ပစ်မှတ် ပါ ။ သူ့ကို စစတွေ့ချင်းမှာပဲ ကျွန်တော့ အပေါ် မှတ်ချက် ကောင်း တစ်ခုရစေချင် လို့ပါ ။ နောက်ဆုံး မှာတော့ သူ့အိမ်ရှေ့ ကို မောင်းသွားခဲ့ ပြီး ဘဲလ် ကို တီးခဲ့ ပါတယ်”
“သူနဲ့ ကျွန်တော် က ဘောလုံး ပြင်ပ မှာ လည်း သိကျွမ်း ကြပါတယ် ။ သူရော ကျွန်တော် ပါ မြင်းပြိုင်ပွဲတွေ ကို ကြိုက်ကြတယ်လေ ။ ဒါကြောင့် ဘောလုံး ထက် မြင်းပွဲ တွေ အကြောင်း တောင် ပိုပြီး ပြောဖြစ် ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျွန်တော့ကို ခေါ်ချင်တယ် လို့ သူကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် ပြောလိမ့်မယ် လို့ မထင် မိခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ တကယ်ပဲ ပြောခဲ့တာပါ ။ ကျွန်တော့ အေးဂျင့် တောင် ဒေးဗစ် ဂီးလ် နဲ့ မတွေ့ လိုက်ရ ပါဘူး” လို့ အိုဝင် က ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မိုက်ကယ် အိုဝင် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ နဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ပြဿနာ တွေ ကြောင့် ၅၂ ပွဲ သာ ကစားခဲ့ ရပြီး ၁၇ ဂိုးသာ သွင်းယူနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အိုဝင် ဟာ ကျောနံပါတ် ၇ ကို ၀တ်ဆင် ပြီး ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ချစ်တဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ကာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဆု ကိုလည်း သူ့ရဲ့ ဘ၀ မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ရယူ ကိုင်မြှောက် နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကို ရောကျရှိစခေဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးဆနျဆနျ အဖွဈအပကျြကို ပွောပွသှားတဲ့ မိုကျကယျအိုဝငျ
လီဗာပူး တိုကျစဈမှုးဟောငျး မိုကျကယျ အိုဝငျ ရဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးထံ ပွောငျးရှေ့ မှု ဟာ အနျဖီးလျ ပရိသတျတှေ ကတော့ ဒီ အပွောငျး အရှေ့ ကို စိတျပကျြမှု ၊ ဒေါသထှကျမှု တှေ နဲ့ တုနျ့ပွနျ ခဲ့ ပွီး အိုဝငျ ကို နှလုံးသား ထဲ ကနေ ထုတျပယျ ပဈခဲ့သူတှေ အထိ ရှိလာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အိုဝငျ ကတော့ သူဟာ မှနျကနျတယျလို့ ယုံကွညျတဲ့ အရာ ကို လုပျခဲ့တာ ဖွဈလို့ နောငျတ မရမိကွောငျး ပွောဆို ခဲ့ သလို ယူနိုကျတကျ ကစားသမား ဖွဈခဲ့တဲ့ အတှကျလညျး ဂုဏျယူ မိကွောငျး ကို အလြှငျးသငျ့သလို ထညျ့သှငျး ပွောဆို လေ့ ရှိပါတယျ ။
အိုဝငျ ဟာ လီဗာပူး ကနေ ရီးရဲမကျဒရဈ ကို ပွောငျးရှပွေီ့း အဆငျမပွေ မှုတှေ ကွောငျ့ အင်ျဂလနျ ကို ပွနျလညျ ပွောငျးရှကေ့ာ နယူးကာဆယျ မှာ ကစားခဲ့ ပါတယျ ။ နယူးကာဆယျ ဟာ အိုဝငျ ၊ မာတငျ ၊ ဗီဒူကာ တို့လို နာမညျကြျော တိုကျစဈမှုးတှေ ရှိခဲ့ ပမေယျ့ ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ ဘောလုံး ရာသီမှာ တနျးဆငျး ခဲ့ရပွီး အိုဝငျ လညျး စာခြုပျ ပွညျ့လို့ အလှတျ နဲ့ ထှကျခှာ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒီလို အနေ အထားကနေ အိုဝငျ ဟာ သုံးသပျသူတှေ မြှျောလငျ့ မထားတဲ့ လမျးကွောငျး ကို ရှေးခယျြ ခဲ့ပွီး မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမား ဖွဈလာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီ ဖွဈရပျ ဟာ အမြားသူငှာ ထငျမှတျ မထားခဲ့ တဲ့ ဖွဈရပျ ဖွဈခဲ့ပွီး အိုဝငျ ကိုယျတိုငျတောငျမှ အံ့အား သငျ့မိ ခဲ့တယျ လို့ ထုတျဖျော ပွောဆို ခဲ့ ပါတယျ ။
အိုဝငျ ဟာ အဆိုပါ အကွောငျးတှေ ကို လာမယျ့ စကျတငျဘာ ၅ ရကျနေ့ မှာ ဖွနျ့ခြီ မယျ့ သူ့ရဲ့ စာအုပျသဈ “Michael Owen : Reboot – My Life, My Time” မှာ ထညျ့သှငျး ဖျောပွ ထားခဲ့ တာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ အိုဝငျ ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈ တုနျးက အသငျး လကျမဲ့ ကစား သမား တဈဦး ဖွဈနေ ခဲ့ပွီး အသငျးသဈ ကို ရှာဖှေ နခြေိနျ ဖွဈ ပါတယျ ။
အိုဝငျ ဟာ လီဗာပူး ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ မွို့ခံ ပွိုငျဘကျ အဲဗာတနျ မှာ ကစား ဖို့ စဉျးစား နပွေီး လီဗာပူး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အမုနျး တရား ကို သတိပွု မိ လငျ့ ကစား အိုဝငျ ကတော့ သူ့ အနနေဲ့ ဘာ အမှား မှ ကြူးလှနျ မိတာ မဟုတျဘူး လို့ ခံယူ ထားတဲ့ အတှကျ ဒေးဗဈ မိုရကျဈ နဲ့ ဆှေးနှေး ခဲ့ တယျ လို့ ဆိုထား ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဒီလို ဆှေးနှေး နတေဲ့ အနေ အထား ကနေ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမား တဈဦး က ဖုနျးဆကျ လာခြိနျ မှာတော့ အိုဝငျ ရဲ့ ဘဝ ဟာ ပွောငျးလဲမှု တှေ ဖွဈလာ ခဲ့ပါတယျ ။ အိုဝငျ ဟာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဖာဂူဆနျ နဲ့ မတှခေ့ငျ တဈည မှာ ကောငျးစှာ အိပျမပြျော ခဲ့ဘဲ အိုးထရကျဖိုဒျ့ ကို သှားရောကျ ကစား ဖို့ အတှကျ ရငျခုနျ စိတျလှုပျရှား နခေဲ့တယျ လို့ ဖျောပွ ခဲ့ ပါတယျ ။
“ဒေးဗဈ မိုရကျဈ နဲ့ ဆှေးနှေးပွီး ၂ ရကျ လောကျ အကွာ မှာ နဈကီဘတျ ဆီကနေ ဖုနျး ၀ငျလာခဲ့ ပါတယျ ။ ဆာအဲလကျဈ က ကြှနျတော့ ဆီ ဆကျလိမျ့မယျ ၊ သူ မငျး ကို ချေါခငျြ နတေယျ လို့ ဘတျ က ပွောသှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါက တကယျကို မယုံနိုငျ စရာ ပါပဲ”
“ကြှနျတျော အိမျခနျး ထဲ ၀ငျပွီး လူးဝဈ ကို ပွောခဲ့ မိပါတယျ ။ ကြှနျတော့ ခေါငျးတှေ ခြာခြာ လညျနေ ခဲ့တာဗြ ။ ဆုဖလား တှေ ကို ပုံမှနျ ရယူ နတေဲ့ အသငျး တဈသငျး ၊ ခနျြပီယံ လိဂျ ပှဲစဉျတှေ ၊ နာမညျကြျောတှေ ၊ ပရိသတျ ရ သောငျးခှဲ ဆံ့တဲ့ ကှငျးကွီး . . . တကယျကို စိတျလှုပျ ရှား စရာ ပါပဲ”
“နောကျထပျ နာရီ အနညျးငယျ လောကျ ကွာတဲ့ အထိ ကြှနျတျော ဖုနျးအနားမှာ ပဲ ရှိနခေဲ့ ပါတယျ ။ ခဏခဏ စောငျးကွညျ့ ရငျးပေါ့ ။ ရုတျတရကျ ဆိုသလိုပဲ ဖုနျးက ထမွညျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ မှတျမထားတဲ့ နံပါတျ စိမျး တဈခု ပါ ။ ဒါမြိုးတှေ ကို ကြှနျတျော ကိုငျလေ့ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါ တော့ ကြှနျတျော က စောငျ့နခေဲ့ တဲ့ သူလေ”
“ဖုနျးကို ၅ စက်ကနျ့ ၆ စက်ကနျ့ လောကျ ကွာအောငျ မွညျခိုငျး လိုကျပွီးမှ ကိုငျလိုကျ ပါတယျ ။ တကယျပဲ သူပါ ။ ကြှနျတျော ဆာအဲလကျဈ နဲ့ ခဏလောကျ စကားပွောဖွဈ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ နောကျ မှာတော့ သူ့အိမျကို လာဖို့ ကြှနျတော့ ကို ဖိတျလိုကျ ပါတယျ”
“အိပျလို့ တောငျ မပြျော ခဲ့ ပါဘူး ။ နောကျနေ့ ရောကျတော့ အကြီ အဝတျ အစားကို သခြောရှေးပွီး ကား မောငျးထှကျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ သူ့ အိမျနဲ့ တဈမိုငျ နီးပါး လောကျ ကှာတဲ့ စူပါမားကတျ ကို ရောကျတော့ ခြိနျးထား တဲ့ အခြိနျ ထကျ ၁၅ မိနဈ စောနေ ပါသေးတယျ”
“ဆယျ မိနဈ စောပွီး သူ့ဆီ ရောကျဖို့ က ကြှနျတော့ ရဲ့ ပဈမှတျ ပါ ။ သူ့ကို စစတှခေ့ငျြးမှာပဲ ကြှနျတော့ အပျေါ မှတျခကျြ ကောငျး တဈခုရစခေငျြ လို့ပါ ။ နောကျဆုံး မှာတော့ သူ့အိမျရှေ့ ကို မောငျးသှားခဲ့ ပွီး ဘဲလျ ကို တီးခဲ့ ပါတယျ”
“သူနဲ့ ကြှနျတျော က ဘောလုံး ပွငျပ မှာ လညျး သိကြှမျး ကွပါတယျ ။ သူရော ကြှနျတျော ပါ မွငျးပွိုငျပှဲတှေ ကို ကွိုကျကွတယျလေ ။ ဒါကွောငျ့ ဘောလုံး ထကျ မွငျးပှဲ တှေ အကွောငျး တောငျ ပိုပွီး ပွောဖွဈ ခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အမှနျအတိုငျး ပွောရရငျ ကြှနျတော့ကို ချေါခငျြတယျ လို့ သူကိုယျတိုငျ တိုကျရိုကျ ပွောလိမျ့မယျ လို့ မထငျ မိခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူ တကယျပဲ ပွောခဲ့တာပါ ။ ကြှနျတော့ အေးဂငျြ့ တောငျ ဒေးဗဈ ဂီးလျ နဲ့ မတှေ့ လိုကျရ ပါဘူး” လို့ အိုဝငျ က ပွနျပွောငျး ပွောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
မိုကျကယျ အိုဝငျ ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကို ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပွီး ဒဏျရာ နဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု ပွဿနာ တှေ ကွောငျ့ ၅၂ ပှဲ သာ ကစားခဲ့ ရပွီး ၁၇ ဂိုးသာ သှငျးယူနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အိုဝငျ ဟာ ကြောနံပါတျ ရ ကို ၀တျဆငျ ပွီး ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ ခဈြတဲ့ ကစား သမား တဈဦး ဖွဈခဲ့ ကာ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေး ခနျြပီယံ ဆု ကိုလညျး သူ့ရဲ့ ဘဝ မှာ ပထမဆုံး အကွိမျ အဖွဈ ရယူ ကိုငျမွှောကျ နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။